London”Go’aamo La Sheegay Inay Kasoo Baxeen Shir Ay Wada Yeesheen Beelaha Bariga Iyo Galbeedka Burco | Berberatoday.com
London”Go’aamo La Sheegay Inay Kasoo Baxeen Shir Ay Wada Yeesheen Beelaha Bariga Iyo Galbeedka Burco
May 15, 2017 - Written by Berbera Today
London(Berberatoday.com)-Qaybaha bulshada rayidka ah ee kasoo jeeda Beelaha ku dhaqan Bariga iyo galbeedka Burco ayaa War-murtiyeed kasoo saaray kulan ay ku sheeyeen Magaalada London ee cariga Ingiriiska.
Kulanka labada beelood ayaa sida war-murtiyeedka lagu sheegay waxa labada dhinac ku gorfeeyeen danaha arrimaha bulshada labada beelood, iyo sidoo kale xaaladaha ka jira deegaanada labada beelood wada degaan, waxa kaloo War-murtiyeedka lagu sheegay in labada dhinac qaban doonan shirar dambe oo daba socda go’aamada kasoo baxay wajiga hore ee is aragga labada beelood.
Sidaasna waxa lagu sheegay War-murtiyeed loo qaybiyey Warbaainta, Warmurtiyeedkaas oo faahfaahsan waxa u dhigan yahay sidan: ..”Maanta oo ay taariikhdu tahay 17ka Shacbaan Hijri 1438, kuna aadan 13th May,2017 waxa magaladda london, UK shirwayne ku qabsaday ergooyin ka socda labada beelood ee walaalaha ah “Habar Jeclo & Habar Yoonis”. Ergooyinkaasi waxay ka hadleen dareen ka dhashay wadahadalo muddo dheer u socday Bulshada Rayidka ah “ civil society” . Wadahadalkas waxaan ka qayb gelin Siyaasiyiinta ,Ganacsatada Waawayn iyo kuwa danaha gaarka ah leh “ Special interest Groups”. Doodahaas waxa lagu xusay inay labada beelood wadaagaan dhiig & dheecaan kuna arooraan Hoy barakaysan oo ah “ Ahlul-Bait” . Waxa la iftiimiyay inay labada beelood wada degaan lix gobol oo kala ah Sool, Sanaag, Saaxil, Saraar, Togdheer iyo Zone 5 . Waxa la qiray in labada beelood hormood ka ahaayeen halgankii dheera ee gobanimadoonka iyo dib-usoo celintii xoryada Somaliland .
Waxa la aqoonsaday in midnimadda labada beelood dani ugu jirto Somaliland iyo guud ahaanba Geeska Afrika. Waxa la dareemay inay labada beelood kala fogeeyeen siyaasiyiin dano gaar ah lihi, taaso dibudhac wayn ku keentay Gobollada Bari ee ay labada beelood wada degaan. Markii arrimahaa si qoto dheer loo lafa guray waxa laysla gartay qodobadda soo socda :
1). In shirkan daah-furka ah ee ka dhacay London, loo bixiyo “ Midnimo 1 “. Si loo daadejiyo dareenka bulshada ,waxaana Gobolka Togdheer iyo Gobollada kaleba lagu qaban doonaa Midnimo 2, Midnimo 3, Midnimo 4 , Midnimo 5 iyo Midnimo 6. Waxa la samayn doonaa Guddiyo Joogta ah , Xeer Hoosaadyo lagu dhaqmo iyo Geedi-socodyo la higsado “ Roadmap”.
2). Waxa magaalooyinka waawayn laga furi doona Guryo goglan oo ay ku kulmaan bulshada rayidka ahi, siiba dhalinyaradda, aqoonyahanadda, culimadda, odayaasha iyo haweenka. Guryahaasi waxay fududayn doonaan isdhexgalka , isbarashada iyo iskaashiga bulshawaynta labada beelood.
3). Qurbajoogta labada beelood waxay kaalin mugleh ka qaadan doonta dhamaystirka mashruucyada qabyada ee Gobollada Bari laga bilaabay oo ay kow ka tahay jidka Erigavo-Burco- Hargeisa. Waxa la unki doona Guddi Cadaadis “ Pressure Group” oo Xukuumadaha soo socda ku cadaadiya inay si cadaalad ah ugu qaybiyaan Gobollada Bariga & Galbeedka Somaliland, mashruucyadda horumarinta ,kaabayaasha dhaqaalaha, mucaawinooyinka dibedda iyo adeegyadda bulshada.
4) Goboladda Barigu waa xudunta dhaqaalaha Somaliland “ Economic hub” . Gobolka Togdheer waa sayladda ganacsiga xoolaha ee ugu wayn Afrika. Saraar & Daadmadheedh waxa ceegaaga shidaal & Gaas ; Gobolka Sanaag waxa u gaara Beeyadda ; khayraadka badda ee ku jira xeebaha ugu dheer Somaliland ee taxan min Berbera ilaa maydh ; Macdanta silsilada Golis ; dalxiiska buuraha Daallo . Hadaba, si looga fai’daysto khayraadkaas dehin , waxaanu samayn doona daraasado cilmiyaysan “ feasibility studies” oo ay maalgashi wadajir ah“ joint ventures” ku sameeyaan dadka deegaanka u dhashay iyo cidii kale ee danaynaysaa.
5) Waxaanu si buuxda u aaminsanahay Distoorka Qaranka Somaliland ee qeexayaya in muwaadinku xor u yahay xisbigga uu ku biiraayo iyo qofka uu codkiisa siinaayo ee ku metelaya Golayaasha deegaanka, wakiiladda iyo Madaxtooyadda. Waxaanu kula talinaynaa cidkasta oo ay khusayso in cod-bixiyaha loo daayo xuquuqdiisa distooriga ah “ Constitutional rights “ oo aan la cadaadin . Waxa kale oo aanu uga baaqaynaa siyaasinyiinta Somaliland inay ka fogaadaan kala qoqobka bulshada , xisbiyadda qarankana inay joojiyaan ololayaasha beelaysan.
6) Waxaanu ku boorinaynaa beelaha Somaliland ee wadaaga deegaan & derisnimo inay samaystaan golayaal iyo madallo ay ku kulmaan kuna lafo guraan nabadeglyadda iyo horumarka deegaanada ay wadaagaan . Ugu danbayn, waxaanu si buuxda ah u difaacayna jiritaanka iyo qaranimadda Somaliland. Wa Bilaahi Towfiiq. Guddida Midnimada Habar Yoonis iyo Habar-jeclo.